Home / भिडिओ / बेलुका रमाउदै घुम्न निस्केका एकै परिवार ८ जनाको मृत्यु
बेलुका रमाउदै घुम्न निस्केका एकै परिवार ८ जनाको मृत्यु 0
पोखरा । कात्तिक ११ – कसको मन थामिएला र ? दुर्घटनामा परिवारका ८ जनाको एकैपल्ट निधन भएपछि । अहिले राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बोरिया गाउँका बासिन्दा र मदन झाको घरमा यस्तै मार्मिक अवस्था देखिएको छ । झा परिवारका साथै पूरै गाउँ शोकमा डुबेको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट शुक्रबार बेलुका साढे ६ बजे छुटेको गाडी शनिबार बिहान त्रिशूली नदीमा खसेको समाचार सुन्दा जिल्लामा दुःख छायो । बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दा आफन्तको खबर बुझ्न दिवा तथा रात्री बस बुकिङ ब्यवस्था समितिको कार्यालय र प्रहरीमा दौडधुप थालेका थिए । केहीबेरमै त्रिशूली नदीबाट शव निकाल्ने काम भइरहेको र १९ जनाको शव निकालि सकिएको र त्यसमध्ये सप्तरीका १५ जना परेको खबर आएपछि सिंगो सप्तरी नै शोकमा डुब्यो । दुर्घटनामा राजविराज–१६ बोरियाका मदन झाको परिवारकै ८ जनाको ज्यान गएको छ । शनिबार बोरियामा टोलभरी चुलो बलेनन् ।
अवोध दुई बाल बालिका जेल मा किन? कारण यस्तो रहेछ पुरा समाचार पढ्नुहोला ।